Haltérophilie – Lalao Olympika 2016 (J.O) : laharana faha-12 Ravololoniaina Elisa Vania | NewsMada
Haltérophilie – Lalao Olympika 2016 (J.O) : laharana faha-12 Ravololoniaina Elisa Vania
Mbola mila ezaka goavana. Tontosa ny talata 9 aogositra teo, tao Centrorio, ny famaranana mivantana teo amin’ny fibatana fonjamby, sokajy -63 kg vehivavy, amin’ny Lalao Olympika 2016 (J.O) any Rio, Brezila. Anisan’ny nanana solontena tokana tamin’izany, teo amin’io sokajin-danja io, i Madagasikara tamin’ny alalan-dRavololoniaina Elisa Vania.
Tany amin’ny laharana faha-12 tamin’ny 15 nifaninana sy niady lohany tamin’izany no nisy an’ity solontena Malagasy ity. Nahavita “total olympique” (T.O) 185 kg ny tovovavy ka 100 kg teo amin’ny “épaulé jeté” ary ny 85 kg kosa, teo amin’ny “arraché”. Na izany aza, nahavita tsaratsara kokoa noho ny vitany tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika farany teo, izay 178 kg ny “total olympique” vitany tamin’izany. Marihina fa mitana ny laharana faharoa aty Afrika eo amin’io sokajin-danja -63 kg io i Vania.
Ankoatra izay, nandrombaka ny medaly volamena sy mitana ny lohany ilay Sinoa, Wei Deng. Nomontsaniny ny “record mondial” satria nahavita “total olympique” 262 kg izy ka 115 kg teo amin’ny “épaulé jeté” ary 147 kg teo amin’ny “arraché”. Nahazo medaly volafotsy ilay Koreanina tavaratra, Hyo-Sym Choe, nahavita T.O 248 kg (105+143) ary nameno ny laharana telo voalohany ilay avy any Kazakhstan, Karina Goricheva, nahavita T.O 243 kg (111+132), nahazo ny medaly alimo.